Iqoqo Lamakhophi Wabangani 'baka-Isshuukan' Ongabalandela - Okunye
Ufuna Izilinganiso Zobungani? Lezi Zilinganiso ze- 'Isshuukan Friends' Zizokusiza Ulandise!
Izilinganiso ze-Isshuukan Abangane (Abangane Beviki Elilodwa) kuthathwe kubalingiswa:
Abangane be-Ishhuukan (Abangane Beviki Elinye) ucezu lochungechunge lwempilo ngobungani. Futhi iqiniso elibandayo lokuthi lokho kungavela kanjani phakathi kwabafana namantombazane.
Le anime ayinalo uhlu olude kakhulu lwezingcaphuno, kodwa inezingcaphuno ongaziqonda, ezihlobene futhi uthathe okuthile kusuka.
Ngakho-ke ngokusho lokho - ake siqale.
Izilinganiso Zabangani be-Ishhuukan Odinga Ukuzibona:
1. Izilinganiso zeYuuki Hase
“Kunezinto engingafuni ukuzikhohlwa… Izinkumbulo zesikhathi esichithwa nabangane. Izinkumbulo zesikhathi asichitha naye yedwa. Izinkumbulo zibalulekile. Kodwa kukhona okunye okubaluleke kakhulu… Lokho ukuqhubeka nokwenza izinkumbulo. ' - Yuuki Hase
2. Izilinganiso zeShougo Kiryu
“Yebo, uma ngimbona emoyizela yedwa ngenkathi efunda lokhu, ngingahle ngicabange ukuthi bekuyinto emangazayo. Kodwa kukhona okungahambi kahle ngabantu abakhuluma udoti futhi bahleke ngemuva komunye, futhi. ' - UShougo Kiryuu
'Ningaba abangani kuphela ngokuxoxa nabantu nize nithole ukuthi niyazwana yini.' - UShougo Kiryuu
“Ukuthi umuntu ubloma nobani kungukukhetha kwabo. Futhi bengingenandaba namahemuhemu. Kuze kube yilapho ngizama ukukhuluma nabo uqobo, bengingeke ngazi… ”- UShougo Kiryuu
3. Izilinganiso zeShiho Fujimiya
'Ukuzisola ngokwedlule kungasombululi lutho.' - Shiho Fujimiya
“Izibalo zifana nephazili noma umdlalo. Kukhona impendulo ecacile, futhi uthatha uhambo lokuyithola. Kepha kunezindlela eziningi zokufinyelela leyo mpendulo. Yingakho kugcwaliseka kakhulu lapho uthola isisombululo. Kunezindlela zokuthola impendulo ngokushesha, noma ngokukhululeka okukhulu. Ngisho nezindlela ezizungezayo zingakuletha kusixazululo esithile. Le ndlela ingahle ingabi yinhle, kepha uma impendulo oyisebenzele kanzima ukuthola ukuthi ilungile, iyakujabulisa. ” - Shiho Fujimiya
Umthombo wesithombe ofakiwe: Iphephadonga Elibodwa Labangane
uchungechunge oluphezulu kakhulu lwe-anime lwasikhathi sonke
Abalingiswa abali-13 be-Anime Anime Abanganikeli Ngokuphathelene Nezothando
Iqoqo Lamacaphuno Anamandla Kusuka kuParasyte: The Maxim!